निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको नाफामा किन आयो गिरावट ? - Arthatantra.com
वि.सं.२०७९ जेठ १५ आइतवार
निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको नाफामा किन आयो गिरावट ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफामा २.२४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ९१ करोड २५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको नाफा गरेको छ ।
गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा यस्तो नाफा ९३ करोड ३५ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । कोरोनाका कारण भएको लकडाउन र त्यसले पारेको प्रभावसँगै निर्जीबन बीमा गर्नेहरुमा कमी भएकोले ति कम्पनीहरुको नाफामा कमी आएको बीमा बिज्ञहरुको दावी रहेको छ ।
पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको रहेको छ । सो कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासमा ६१.२५ प्रतिशत नाफा बढाएर ३ करोड ८३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । सो कम्पनीले गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा २ करोड ३७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
नाफा बढाउने कम्पनीको दोस्रो स्थानमा सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स रहेको छ । सो कम्पनीले चालु आवको असोज मसान्तसम्म २ करोड १७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५६.५७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले १ करोड ३८ लाख ९० हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चार निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा घटेको छ । नाफा घट्ने कम्पनीहरुमा पुराना कम्पनीहरु रहेका छन् । ति कम्पनीहरुमा अजोड इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र एनएलजी इन्स्योरेन्स रहेको छ । ति कम्पनीहरुको नाफा गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा क्रमशः ७९.२३, ४२.१७, १०.३२ र ५.०२ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफामा झिनो सुधार देखिएको छ । असोज मसान्तमा एभरेष्टले १.३८ प्रतिशत र लुम्बिनी जनरलले ०.२३ प्रतिशतले मात्र नाफा वृद्धि गरेको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा शिखर इन्स्योरेन्स ९.२८, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले २२.७९, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १९.८७, प्रभु इन्स्योरेन्स १६.१७, युनाईटेड इन्स्योरेन्स ११.६९ र सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १०.८७ प्रतिशतले नाफामा वृद्धि गरेका छन् ।
हेर्नुहोस्, कुन निर्जीबन बीमा कम्पनीको नाफा कति ?
वि.सं.२०७८ मंसिर १४ मंगलवार १६:२८ मा प्रकाशित
News Views: 391
अघिल्लाे थप दुई बैंकसहित ६ कम्पनीहरुले घोषणा गरे लाभांश, कुनको बोनस कति ?
पछिल्लाे धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाई, को-को छन् प्रतिष्पर्धामा ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आज प्रस्तुत हुने
वि.सं.२०७९ जेठ १५ आइतवार ०९:४९
काठमाडौं । आज अर्थात आइतबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०...
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा, यस्तो छ पूर्णपाठ
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार २०:११
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १५ लाखसम्म ऋण दिने, ब्याजदर कति ?
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार १६:४४
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबिच तलबी...
३ लाख ८८ हजार कित्ता बिक्री भयो मेगा बैंकको सेयर, कति छ मूल्य ?
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार १५:५५
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन मेगा बैंकको सेयर मूल्य...
उच्च दरमा बढ्यो दुई कम्पनीको सेयर मूल्य, प्रतिकित्ता कुनको कति बढ्यो ?
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार १५:३६
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा...
सेयर बजारमा गिरावट, कारोबार रकममा भने बढोत्तरी
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार १५:२३
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयर बजारमा गिरावट आएको...